Kedu ihe dị iche na ihu igwe na ihu igwe? | Network Meteorology
Ọtụtụ mgbe anyị na-ekwu maka ihu igwe ma ọ bụ ihu igwe dị ka a ga - asị na ha bụ otu okwu, mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị ihe ziri ezi ịme. Okwu abụọ a nwere ubé dị iche iche pụtara, ya mere, ngwa ha dị iche.
Ọ bụrụ na ị na-eche Kedu ihe dị iche na ihu igwe na ihu igwe, echefula isiokwu a 😉.
1 Kedu oge?
2 Kedu ka ihu igwe dị?
Weather bụ ikuku ọnọdụ na-adị na oge ụfọdụ. Ọ dabere n'ọtụtụ ihe, dịka ndị a:
temperatura: bụ ogo nke ikuku na ikuku na ebe enyere na oge.
Ifufe: bu oke ikuku nke ikuku na ikuku.
Ikuku ikukubụ ike nke ikuku na-eme n'elu ụwa.
Igwe ojii: ha bụ mmiri mmiri mmiri mmiri, ma ọ bụ ice ma ọ bụrụ na ha dị elu, na nkwụsịtụ.
Yabụ, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mbara igwe dị ọcha n’ụbọchị ọkọchị, ihu igwe ga-acha.
Ihu igwe ahụ chịkọta nsonaazụ niile enwetara banyere oge nke mpaghara ụfọdụ. A na-enyocha data ndị a niile kemgbe afọ iji nwee ike igosipụta ihu igwe na mpaghara ahụ. Na mgbakwunye, ihe ndị dịka ọnọdụ okpomọkụ, ikuku ma ọ bụ nrụgide, enwere ndị ọzọ na-emetụta ihu igwe ma nwee ike gbanwee ya nke ọma, dị ka ndị a:
Ogologo: bụ ebe kwụ ọtọ n’agbata ọkwa dị n’elu ụwa na oke osimiri. Ọ dị elu karịa, ihu igwe na-ajụkarị oyi.
Latitude: bụ ogologo nke na-ekewa otu ebe na akara akara. N’ebe dị nso nso nke equator anyị nọ, ka ihu igwe ga-adị ọkụ.
Oke Osimiri: ha bu ndi mmadu eweputara site na ikuku, ikuku na ihe di iche na otutu mmadu. Mmiri ndị a na-emetụta ihu igwe ụwa. Ke Europe, ka ihe atụ, anyị na-enwe a ọnọdụ ihu igwe ọnọdụ ekele, karịa ihe niile, ka Ọdọ mmiri, nke na-eburu mmiri ọkụ site na America gaa n'ụsọ oké osimiri Europe.
Anyị nwere olile anya na ọ bụrụla nke mmasị gị 🙂.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Kedu ihe dị iche na ihu igwe na ihu igwe?
Anyị na-anabata oge oyi 2016-2017